ဖြူနုဝင်းမွတ် နေတဲ့ အတွင်းသားအလှလေးတွေ အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှားရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Shwe Yoe
ဖြူနုဝင်းမွတ် နေတဲ့ အတွင်းသားအလှလေးတွေ အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှားရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
ပုံလေး တွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ် Lလစ်ရှား တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ က တော့ မခို့တရို့ ပုံရိပ်လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အ ပြည့် ရှိ တဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေး လာတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်..၊၊ Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့အားပေးဝန်းရံ မှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ် ပါ တယ်..။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုကို လည်း အများဆုံး ရရှိထား တာ ပါ..။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။ အခုဆိုရင်လည်း မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ လန်းနေ တဲ ဗီဒီယိုလေး ကို ပရိတ်သတ်ကြီး လည်း ကြည့် ရှု့ ခံစားနိုင် အောင် ကူးယူ ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါ တယ် နော် … .
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်း တဲ့ အမူအရာလေးတွေလုပ်ပြနေ တဲ့ မေဂရေ့စ် ရဲ့ ဗီဒီယို
နှစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
ကျောင်းမတက်ဘဲ လမ်းမှားလျှောက်ကာ PDFထဲရောက်နေတဲ့ လူငယ်လေး များ ကို ပြန်ခေါ်ကြရန်”တိုက်တွန်း လာ တဲ့ ဇော်မဲလုံး..
အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင် လောက်အောင် လန်းလွန်း တဲ့ ကမ်းခြေ က ဝတ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ ဗီဒီယို